INFINITE: यो के हो? यसको अर्थ के हो? प्रयोग र अधिक
अनन्त: यो के हो? यसको अर्थ के हो? प्रयोग र अधिक
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ के हो इन्फिनिटो? आज तपाईसँग यस चाखलाग्दो विषयसँग सम्बन्धित सबै कुराको डिसेफर गर्ने अवसर छ जुन धेरै मानिसहरुको टाउकोमा रहेको छ, यसलाई नबिर्सनुहोस्।
3 विभिन्न क्षेत्रमा
यो एक अन्त हो भनेर संकेत गर्न एक शब्द हो, त्यहाँ कुनै सीमा छैन, अनन्तता छ र ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको सीमितता सम्म धेरै कुराहरु छन्। धेरै को लागी इन्फिनिटो यो केवल केहि विचार हो कि केहि धेरै लामो चीज परिभाषित गर्न को लागी। अन्त्य नभएको कुराको वर्णन गर्न; यो शब्द अनन्त काल, स्थायी, अनन्त वा केहि भन्दा टाढा जान्छ सबै सम्बन्धित परिभाषित गर्न प्रयोग भएको छ।
विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा यसलाई चीजहरू वा परिमाणहरूको सन्दर्भको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसको सीमा वा अन्त छैन। यो पूर्ण सीमितको विपरित हो र गणितमा यो सीमित अवधिको विपरीत हो, सीमित; सँग निर्दिष्ट गरिएको छ अनन्त प्रतीक जहाँ गोलाकार रेखा बिन्दुबिना देखा पर्दछ जुन एक अर्कालाई मिल्दछ (∞)।
प्रतीकको सम्बन्धमा, हामी यो भन्न सक्दछौं कि यो एक तथ्यसँग सम्बन्धित छ कि यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ यदि यसको सुरुवात वा अन्त्य छ भने, यो कहाँ सुरु हुन्छ र कसरी शुरू हुन्छ, निर्धारण हुँदैन, साथै कहाँ सुरु हुन्छ; तथ्य यो छ कि आज यो धेरै विषयहरु मा परिभाषित छ र एक झूट आठ को रूप मा पहिचान गरीन्छ।
एउटा विज्ञानले सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्दको अर्थ गणित हो, जसले कम्प्यूटर विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान र विभिन्न विषयका साथ यसलाई एक समान नाम दिएका छन्। धार्मिक क्षेत्रमा ऊ परमेश्वर र अनन्त देवीदेवताहरूसँग तुलना गरिएको छ, जसको न ठाउँ छ न समय; तर हामी हेरौं कि केहि क्षेत्रहरू तिनीहरूलाई परिभाषित गर्छन्।
यो केहि अपरेशन्स परिभाषित गर्न प्रयोग हुन्छ जुन सीमित हुँदैन, सेटको सिद्धान्तले यसलाई मानसँग परिभाषित गर्दछ जुन कम अनन्त देखि बढी अनन्ततामा जान्छ। यो क्रमबद्ध संख्याहरूको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, जसले शंकुहरूमा अर्डर राख्छ; त्यस्तै, अनन्तको संख्या पहिलो संख्यात्मक क्रममा र अनन्त कार्डिनल नम्बरहरूमा विस्तृत छ।
इन्फिनिटी प्रतीक पहिलो पटक अपनाइएको थियो जब अंग्रेजी गणितज्ञ जोन वालिसले यसलाई आफ्नो एक वैज्ञानिक कृतिमा समावेश गरे। यो प्रतीक १ith1656 मा एरिथमेटिक इन्फिनिटोरम पुस्तकमा गणितीय संकेतको रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ; पछि यसलाई ग्राफिक रूपमा अभिव्यक्त गरियो र आज हामी यो जान्छौं कि १ 8 ern edition संस्करणमा स्विस वैज्ञानिक जेकब बर्नाउलीको गणितीय कार्यहरूमा लेमिनिस्केट (a को एक क्षैतिज चित्र भएको चित्र) भनेर चिनिन्छ। (१1894-१1655०1705)
जे होस्, त्यहाँ एउटा विश्वासको सम्भावना छ, जहाँ प्रतीक संकेतबाट आउँदछ जुन किमिया प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको थियो, साथ साथै १ religious औं शताब्दीका केही धार्मिक सन्दर्भहरूमा। त्यहाँ अनन्त प्रतीकले 17 को आकारमा सर्पको घाउलाई जनाउँछ। uroboros भनिन्छ।
अन्य सिद्धान्तहरूले अनन्त प्रतीकलाई ईश्वरीय र अलौकिक अवस्थासँग जोड्न खोजेका छन्। यस्तो हावापानी घटना हो जसलाई अनालेमा भनिन्छ जहाँ अनन्तको आकृति आकाशमा कुनै वर्णन बिना नै देखा पर्दछ; व्यक्तिहरूले यसलाई विभिन्न अतिरिक्त-संवेदी र अलौकिक अवस्थाको लागि श्रेय दिन्छन्।
सबैभन्दा भर्खरको सिद्धान्त विज्ञान फिक्शन र फिल्मसँग सम्बन्धित छ, जसले एभेन्जर सुपर हीरोको सिर्जनाकर्ताहरूलाई जोड्दछ र एक शक्तिशाली देखाउँदछ अनन्त गौंलेट, जसको नेतृत्व टोनोस नाम गरेको एक शक्तिशाली र दुष्ट व्यक्तिले गर्दछ, जसले संसारलाई कब्जा गर्न खोज्दछ: तथ्य यो हो कि धेरै व्यक्तिहरू यो सोच्दछन् कि यो व्यवस्था गरिएको म साँच्चिकै अस्तित्वमा छु, जसले दाबीहरुमा एक ठूलो कथा र झूट पैदा गर्दछ।
टेक्नोलोजीको यस क्षेत्रमा संख्या वा अनन्त प्रतीक केहि प्रोग्रामिंग भाषाहरूमा सम्बन्धित छ। यिनीहरूले विशेष मूल्य दिन्छ र यसलाई अनन्त भन्छ; परिणाम जस्तै प्राप्त गरीन्छ केही गैर-मौलिक वा अविश्वसनीय गणितिय कार्यहरू (सर्तहरू जुन प्रोग्रामरहरू द्वारा मात्र बुझिन्छ) प्रदर्शन गरेपछि।
जे होस्, जब तपाइँ तिनीहरू मध्ये कुनै एकलाई सोध्नुहोस्, तिनीहरूले वर्णन गर्छन्: ती अत्यधिक जटिल अपरेसनहरू हुन्, समाधान गर्न सम्भव छ तर त्यो मात्र प्रोग्रामिंग विशेषज्ञहरू द्वारा गरिनु पर्छ; त्यसोभए तिनीहरू केवल कम्प्युटरमा विकसित भएका छन्, तिनीहरू तर्क गर्छन् कि यदि तिनीहरू सरल भाषामा गरिएको थियो भने परिणामहरूले त्रुटि फेला पारे।
आध्यात्मिक मानसिक सम्बन्ध को यो क्षेत्र "अनन्त" को रूप मा परिभाषित गर्दछ, त्यो हो, यो यो सम्पत्ति र संकाय दिन्छ। यो प्रतिबन्ध स्वीकार गर्दैन, यो बिल्कुल बिना शर्त र अनिश्चित छ, त्यसैले यो सीमांकित छ भने यो कुनै सीमा स्वीकार गर्न सक्दैन।
मेटाफिजिक्स अभिव्यक्त गर्दछ कि अनन्तमा सीमित राख्नु ब्रह्माण्डको सत्यलाई अस्वीकार गर्नु हो; कैद पूरै अस्वीकार गर्नुहोस्। यस प्रकारले सीमितताको बेवास्ता गर्नु भनेको बेवास्ता गर्नु हो; अर्को शब्दमा, सबै सीमाहरूको उपेक्षा कुल र पूर्ण पुष्टिको वास्तविकता बराबर हो; तिनीहरू यो पनि विचार गर्दछन् कि के केहि सीमितता छैन यसलाई अस्वीकृत गर्न सकिन्छ र यसैले यसको बाहिर केहि पनि समावेश छ, त्यसैले अवस्थित छैन।
मेटाफिजिक्सले व्यक्त गरेको असीमको यो अवधारणा, अधिक वा कममा यस अवधारणाले प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको राम्रो विस्तृत मापदण्ड हुन्छ; उनीहरूका लागि यो केवल प्रतीक मात्र होईन तर त्यहाँ केहि चीज छ, तिनीहरू यसको अस्तित्वलाई इन्कार गर्दैनन् किनकि तिनीहरूको कुनै सीमा छैन।
अरस्तुका अनुसार सीमित अवधारणाले असीमको कुल अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछ। यस तरिकामा जब कुरा गर्दै अनन्तता सीमित अरिस्टोटेलियन विचारहरूमा, यसले असीमित शरीरलाई जनाउँछ जुन परिमितको अस्तित्वको बिरूद्ध जान्छ; यद्यपि, अन्य दार्शनिक प्रवाहहरूले सुझाव दिन्छ कि असीम शक्तिमा त्यस्तो स number्ख्या हो जुन चरम सीमामा पुग्न नसक्दा अर्को नम्बर पनि सँधै जोड्न सकिन्छ।
दार्शनिकहरू विश्वास गर्छन् कि अनन्तता मानवको सृष्टि हो, र विशेष गरी जब संख्याहरू देखा पर्न थाले, एक्सपोन्शियन्टलले असीम स the्ख्याको मूल्यलाई थप सुदृढ पार्दछ, र अधिक कारण खोजिन्छ र जहाँ तथ्या obtained्कहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो बढ्नेछ र बढ्नेछ। ; जसको लागि उद्देश्य वा रिजोलुसनको कुनै प्रकार छैन।
यदि तपाईंलाई यो लेख मनपर्‍यो भने, हामी तपाईंलाई अर्को लेख पढ्न आमन्त्रित गर्दछौं, जहाँ ठूलो चासोका पक्षहरू पनि देखाइन्छ प्राकृतिक संख्या: तिनीहरू के हुन्? सुविधाहरू, र अधिक
सशक्तिकरण के हो? यो कसरी गठन हुन्छ? र अधिक धेरै
पृथक त्रिकोण: यो के हो? वर्गीकरण र अधिक
मुख्य ज्यामितीय आंकडा र उनीहरूका नामहरू
गुणन तालिका १ देखि १०: उत्तम उपकरण
प्राकृतिक संख्याहरूको गोलाकार: यसले के समावेश गर्दछ?